ကလေးတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်းမှာ အရင်လို ပြိုလဲလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Suehninsi
ကလေးတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်းမှာ အရင်လို ပြိုလဲလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အနုပညာလောကနဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကွာဝေးခဲ့ပြီးနောက် ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတစ်ယောက်ပါ။ လိုအပ်နေတဲ့နေရာကို လက်မနှေးကူညီနေတဲ့အပြင် ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာ တည်ထောင်ပြီး မိဘမဲ့ကလေးအယောက်သုံးဆယ်ကျော်ကို ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်နေပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီကလေးတွေကြောင့်ပဲ
သူစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါတိုင်း အရင်လိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြိုလဲဖို့ မဖြစ်တော့ကြောင်း ရင်ထဲကခံစားချက်တချို့ကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “တ‌စ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ပြီး မိသားစုကိုဦးဆောင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းက Strongဖြစ်တယ် ပဲ သိကြတာ ဘယ်လောက် ထူမတ်နေရလဲ
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အသိဆုံးပဲ ဖြစ်တယ်…. အရင်ကဆို ငါပြိုလဲရင် ငါ့အမေ ဘယ်လိုရပ်တည်ရှင်သန်မလဲ အတွေးနဲ့ ပြန်ထူမတ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မ စိတ်အတက်အကျမှာ ကျွန်မ အဆိုးဝါးဆုံးအချိန်တွေရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့…. စိတ်အတက်အကျမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်လွတ်လပ်စွာ
စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးခဲ့တဲ့ အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့ … ကျွန်မ အခုများတော့… ဒီကလေးတွေ မျက်နှာ… ဒီကလေးတွေ အပြုံး… နို့ဆာလို့ ငိုတဲ့ အသံလေးတွေ မုန့်ခွံ့ကျွေးလို့ အားပါးတရ စားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေ…. ကျွန်မ စိတ်ကျချိန်တောင် ငါဘယ်လိုမှ ပြိုလဲလို့မရဖူးဆိုတဲ့ ကျမ
လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကလေးတွေကြောင့် ကျွန်မရဲ့ အင်အား…. ကျွန်မရဲ့ အားမာန်တွေအကုန် အမြဲတမ်းတက်ကြွနေခဲ့ရပါတယ်… ချစ်လိုက်တာ သားနဲ့သမီးလေးတွေရေ ” ဆိုပြီးရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူ့ရဲ့သား၊သမီးအရင်းလေးတွေလို ချစ်ခင်ရတဲ့ကလေးတွေကြောင့် အချိန်တိုင်းမှာ ကလေးတွေရှေ့က မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ပြိုလဲဖို့မလွယ်တောပါဘူးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ…
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ အနုပညာလောကနဲ့နှဈအနညျးငယျကှာဝေးခဲ့ပွီးနောကျ ပရဟိတအလုပျတှနေဲ့ ပရိသတျရှပွေ့နျလညျရောကျရှိလာသူတဈယောကျပါ။ လိုအပျနတေဲ့နရောကို လကျမနှေးကူညီနတေဲ့အပွငျ ခိုငျနှငျးဝရေငျသှေးလေးမြားဂဟော တညျထောငျပွီး မိဘမဲ့ကလေးအယောကျသုံးဆယျကြျောကို ရငျအုပျမကှာစောငျ့ရှောကျနပေါသေးတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ဒီကလေးတှကွေောငျ့ပဲ
သူစိတျဓာတျကတြဲ့အခါတိုငျး အရငျလိုလှယျလှယျနဲ့ပွိုလဲဖို့ မဖွဈတော့ကွောငျး ရငျထဲကခံစားခကျြတခြို့ကိုမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ “တ‌ဈယောကျတညျး ရပျတညျပွီး မိသားစုကိုဦးဆောငျနရေတဲ့ အမြိုးသမီးတိုငျးက Strongဖွဈတယျ ပဲ သိကွတာ ဘယျလောကျ ထူမတျနရေလဲ
ကိုယျ့ကိုကိုယျသာ အသိဆုံးပဲ ဖွဈတယျ…. အရငျကဆို ငါပွိုလဲရငျ ငါ့အမေ ဘယျလိုရပျတညျရှငျသနျမလဲ အတှေးနဲ့ ပွနျထူမတျနိုငျပမေယျ့ ကြှနျမ စိတျအတကျအကမြှာ ကြှနျမ အဆိုးဝါးဆုံးအခြိနျတှရှေိခဲ့ဖူးတာပေါ့…. စိတျအတကျအကမြှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ စိတျလှတျလပျစှာ
စိတျထှကျပေါကျပေးခဲ့တဲ့ အခြိနျတှလေညျးရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့ … ကြှနျမ အခုမြားတော့… ဒီကလေးတှေ မကျြနှာ… ဒီကလေးတှေ အပွုံး… နို့ဆာလို့ ငိုတဲ့ အသံလေးတှေ မုနျ့ခှံ့ကြှေးလို့ အားပါးတရ စားနတေဲ့ပုံရိပျတှေ…. ကြှနျမ စိတျကခြိနျတောငျ ငါဘယျလိုမှ ပွိုလဲလို့မရဖူးဆိုတဲ့ ကမြ
လကျကို ဆုပျကိုငျထားတဲ့ လကျကလေးတှကွေောငျ့ ကြှနျမရဲ့ အငျအား…. ကြှနျမရဲ့ အားမာနျတှအေကုနျ အမွဲတမျးတကျကွှနခေဲ့ရပါတယျ… ခဈြလိုကျတာ သားနဲ့သမီးလေးတှရေေ ” ဆိုပွီးရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သူ့ရဲ့သား၊သမီးအရငျးလေးတှလေို ခဈြခငျရတဲ့ကလေးတှကွေောငျ့ အခြိနျတိုငျးမှာ ကလေးတှရှေကေ့ မားမားမတျမတျရပျတညျနိုငျဖို့ ပွိုလဲဖို့မလှယျတောပါဘူးတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ…
Source : Khine Hnin Wai’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar
တစ်လတိတိ ဘာအချိုရည်မှ မသောက်ပဲ ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် Challenge ခေါ်လိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း
အဖေဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားတာ(၁၀)နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ အိမ်ခြေမဲ့တွေအတွက် မိုးရာသီ ခိုလှုံဖို့ ထီးတွေ လှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ Sinon Loresca